Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): January 2008
Suu Kyi tells Myanmar to "prepare for worst"
Despite admitting U.N. special envoy Ibrahim Gambari twice, the generals have failed to embark on any sort of programme of negotiations, and human rights groups say they are continuing to arrest dissidents and democracy activists.
(Reporting by Aung Hla Tun, additional reporting by Nikolas Lynn; Editing by Ed Cropley and Roger Crabb)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:39 AM0comments
art by Mr.creator
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီး ဖိလစ်ပိုင်သမတပြောသွား
ဖိလစ်ပိုင်သမတ မစ္စ်အာရိုယိုက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဒါးဗ်စ်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရာညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြောဆိုသွားတာပါ။
သူမအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပေမဲ့ အခုတကြိမ်ပြောဆိုရာမှာ ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေ သုံးသွားတာဖြစ်သလို၊ အာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသတွင်းအခြေအနေတွေကိုပါ ထင်ဟတ်ပေါ်လွင်စေတဲ့စကာလုံးတွေကို ပြောဆိုသွားတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလွဲမှု အမြန်ဆုံးမြင်ချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ခြင်းလွတ်ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ အာဆီယံအနေနဲ့ မိမိရပ်တည်ရမဲ့ အနေအထားကိုလည်း သိနေပြီးသားပါလို့ ဆိုပါတယ်။
အာဆီယံဒေသတွင်း အများကောင်းဖို့ ၀ိုင်းသန်းဆောင်ရွတ်တဲ့နေရာမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျအဆင့်တခုကတော့ အာဆီယံအနေနဲ့ထားရှိဖို့လိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ ရေးဆွဲပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပဋိဥာဉ်စာတမ်းကို အတည်ပြုဖို့ လတ်မှတ်ရေးထိုးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပါ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်လာရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်းတွေကို စုပေါင်းရွေးချယ်ကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီလို့လည်း သမတ အာရိုယိုက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ယခုတလော ယမမင်းအလုပ်ရှုပ်နေသည်။ လူ့ပြည်မှ မိုးပြဲဒယ်များသစ်သားယောင်းမ၊ ဆီပုံး၊ ဖိုခနောက်နှင့် မီးသွေးများ ငရဲပြည်မှမှာနေရသည်။ လူ့ပြည်တွင် ရသလောက်လိုက်ဝယ်ရန် ညွှန်ကြား ထားပါလျက် အကုန်လည်း လိုက်ဝယ်ပါလျက် အရေအတွက်က မပြည့်သေးသဖြင့် လူယောင်ဖန်ဆင်း ထားသူ ယမမင်း. စေတမန်ကသတင်းပို့လာသည်။
လူ့ပြည်မှာ အခုကျနော်ဈေးလိုက်ဝယ်နေတုံး သံဃာတော်တွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်နေသည်။ တုတ်နဲ့ရိုက်နေသည် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ဟူ၏။ ထိုအခါ “ငရဲသနင်း” ယမမင်းက ငါသိတယ်။ ဒါ ကြောင့် အဲဒီကောင်တွေကို အ၀ီစိမှာ ကြော်ဖို့မင်းတို့ကို (ဒယ်အိုးတွေ Instruments) တွေ လိုက်ဝယ် ခိုင်းတာဟု ပြောလေ၏။
ယမမင်း. လူယုံသည် ဒယ်အိုးပေါင်း (၅၃၂၈၈၁၁) လုံးရပြီး စစ်တပ်က ငါးသိန်းပဲရှိတာဆို တော့ လောက်ပြီးလားဟု ဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားသောအခါ ယမမင်းက ဟေ့ကောင် ရန်ကုန်နဲ့ပျဉ်းမ နားဧရိယာမှာ ဖုန်းမသုံးရဘူး သုံးရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မင်းမသိဘူးလား၊ ပြီးတော့ မင်းဝယ် ထားတဲ့ ဒယ်အိုးတွေက သံကြွပ်တွေ။ သံဒယ်အိုးဝယ်ပါဟု ညွှန်ကြားလေသည်။
နောက်ပြီး ဒယ်အိုးကမလောက်သေးဘူး၊ ရဲတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့တွေ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ အားလုံးအ၀ီစိ ကိုရောက်မှာဆိုတော့ လိုသေးတယ်ဟု အကြောင်းပြန်လိုက်လေ၏။
ထိုကာလမတိုင်ခင် သီတင်းကျွတ်က တပ်ချုပ်ကြီးက ဗိုလ်မောင်အေးကို ဘာဖြစ်လို့သီတင်း ကျွတ်မှာ မီးထွန်းရတာဟုမေးသောအခါ၊ ဂေါတမနတ်ပြည်ကနေ ပြန်ကြွလာမှာမို့လို့ပါဟု ပြော၏။ ဘာသွားလုပ်တာလဲဟု မေးသောအခါ မူးနေသောဗိုလ်မောင်အေးက မသိသဖြင့် Shopping ထွက် တာ၊ ဈေးဝယ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟု ဖြေ၏။ အပေါ်ကနေလာမှာဆိုတော့ မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်အမြောက် များနဲ့ ပစ်ခတ်ပါဟု လေတပ်ဦးစီးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ကြည် (ဆေးခြောက် မောင်ကြည်) က ညွန်ကြားသဖြင့် မှော်ဘီမှဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်တင် (ကျောက်ရူး) နှင့်မိတ္ထီလာမှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်ထွန်း (နံရုံး ဇော်ထွန်း) တို့အလုပ်ရှုပ်ကုန်၏။ မိုးပေါ်သို့ ဘုရားလာမည့်ဘက်ကို လေယာဉ်ပစ်အမြောက်ကြီး များဖြင့် မိုးပေါ်သို့ ရမ်းသမ်းချိန်ရလေ၏။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်သူ မြတ်ဟိန်း (လေမြတ်ဟိန်း) ခေါ် (အတောင်ပံ) ကမေးသောအ ခါ ကြည်း၊လေ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးခံစစ်စီမံချက်ပါဟု ရမ်းသမ်းရွှီးရလေ၏။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသော အကြောင်းရင်းတို၏ နောက်ခံသမိုင်းကား ဤသို့တည်း။
သံဃာတော်များကို ပခုက္ကူမြို့တွင် ရိုက်နှက်သဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော တနိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်း စွာ ဆ၌ပြပွဲကြီးကို နှိမ်နှင်းရန်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးက ဗိုလ်ချုပ်များကို အစည်းအဝေးခေါ်၏။ မည်သူမျှ မျက်တောင်မခတ်ရဲ၊ နားရွက်၊ အမြီးမလှုပ်ရဲ။ ကိုမောင်အေးက ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင် ဘယ်သူလဲဟု မေးသောအခါ ဘယ်သူမှ ချက်ချင်းမဖြေနိုင်၊ အားလုံးငြိမ်နေသောအခါ၊ သက်သာလို သက်သာငြားဖြင့် ကိုရွှေမန်း(သူရရွှေမန်း)က ထောက်လှမ်းရေးက ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆန်းကို မနက်ဖြန် သံဃာတွေရဲ့ခေါင်းဆောင် (၉) ဦးအမည်စာရင်း လိုချင်တယ်၊ အခုချက်ချင်းလုပ်၊ မနက်ဖြန်မနက် (၈) နာရီလိုချင်တယ်ဟု ညွှန်ကြားလေ၏။
နောက်နေ့မနက် (၈) နာရီထိုးသောအခါ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆန်းကဖိုင်တခုကို ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်း သို့ပေး၏။ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းက ကိုမောင်အေးကိုပေး၏။ ကိုမောင်အေးက ဖွင့်ဖတ်မကြည့်ပဲ တပ်ချုပ်ကြီး စားပွဲပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်၏။
(၁၅) မိနစ်ခန့်နေ၍ တပ်ချုပ်ကြီးရောက်၍ဖွင့်ကြည့်သောအခါ သံဃာတော်များ၏ ခေါင်း ဆောင် (၉) ဦးအမည်မှာ ဂေါတမ၊ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ။ ရှင်မဟာကဿပ စသည် ဖြင့် ရဟန္တာကြီးများ၏ အမည်များကိုရေးထားသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ထောက်လှမ်းရေးက ကြံရာမရ သဖြင့် ထိုကဲ့သို့ရေးထားသည်ကိုတပ်ချုပ်ကြီးက အားလုံးကိုဖမ်းရန်ဟု ရေးကာလက်မှတ်ထိုးပေး လိုက်သဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးများ အချင်းချင်းငိုရမလိုလို ရယ်ရမလိုလိုဖြစ်ကြကုန်၏။
ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သင်္ကန်းအစုံ ၁၄၀၀ ကျော်ထုတ်၍ လေ့ကျင့်ရေးအရာ ရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ထွေး (စိန်နားကပ် အောင်ထွေး)က ဗထူးတိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းမှ ဗိုလ်မှူး အေးသောင်း၏တပ်ဖွဲ့မှလူ ၂၀၀၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဝင်း (ဗူးသီးကျော်ဝင်း) တပ်ဖွဲ့မှ လူ ၄၀၀၊ အင်းတကော်အခြေချယန္တာယားမှ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်သိန်းတို့ထံမှ စစ်သားဒရိုင်ဘာ ၆၀၀ ကျော်တို့ကို ကတုံးတုံးကာ ဘုန်းကြီးအတုများလုပ်လေ၏။
စစ်တပ်မှ လွှတ်ထားသော ဘုန်းကြီးအတုများကို ရပ်ကွက်သူများက အစစ်များဟုထင်၏။ အမှန်တကယ်ဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များ စာသင်သားဆရာတော်များကို ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ရဲတပ်ရင်းများက အတုဟုထင်၏။ ရန်ကုန်တိုင်းရဲမင်းကြီးက ဘယ်သူ့ကို သာသနာဝင်မှတ်တမ်း စစ်ရ မှန်းမသိ။ နောက်တနေ့တွင် ရဲမှူးချုပ်သန်းဟန် (ခြောက်ကျပ်သန်းဟန်)က စစ်သားတဖြစ်လဲ သံဃာ တော်အတုများကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်၏။ ရပ်ကွက်ထဲကလူများက ဒေါသထွက်ကာ အမှတ် (၆) ရဲတပ်ရင်း မှူးသိန်းထွန်း (၂ လုံးထီသိန်းထွန်း) နှင့်အဖွဲ့ကိုနပမ်းဝင်လုံးကြလေ၏။
အားလုံး ရှုပ်ထွေးကုန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ အတုပြဿနာကြောင့်ဖြစ်၏။ နိုင်ငံခြားသတင်း ထောက်များကို ရဲများက ဓာတ်ပုံဆရာများဟု ထင်၏။ ကားသမားများကို ရဲများက ထောက်လှမ်းရေး သမားများဟု ထင်၏။ အရပ်ဝတ်ရဲများကို နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များက ဈေးသည်များဟု ထင်၏။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးများက သံဃာတော်အစစ်များကို ဘုန်းကြီးအတုများဟုထင်၏။ ထိုအခါ အားလုံး ရှုပ်ကုန်လေတော့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေသည်ကို အရက်သောက်ထားသော တပ်မ (၃၃) လက်အောက်ခံ ခလရ (၁၄)၊ ခလရ (၇၆)၊ ခမရ (၁၁) နဲ့ (၇၇) လက်အောက်ခံ ခမရ (၃၉၁) တို့မှ စစ်သည်များနဲ့ အမှတ် (၆) ရဲတပ်ရင်းမှ ရဲများက သေနတ်ဖြင့်တလစပ် ပစ်တော့လေသည်။
ကုလသမဂ္ဂမှ ဂမ်ဘာရီလာသောအခါ သူရရွှေမန်းက ဦးဇင်း (၂) ပါးချော်လဲတာပါဟု ဖြေ၏။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကမေးသောအခါ ဂျပန်သတင်းထောက်သေတာ ဗိုက်အောင့်လို့ပါဟုဖြေ၏။ အာဆီယံ နိုင်ငံများကမေးသောအခါ အခုဖြစ်တာက ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဟိုဥစ္စာက ဒီဟာပါ၊ ကျနော်တို့ အမျိုး သားညီလာခံကြီးကို ပြီးအောင်လုပ်နေပါတယ်။ အခုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာက ဘုန်ကြီး ၄- ၅- ၆ ပါး ပြဿနာ တက်တာပါ ဟီး… ဟီး… ဟီး… ဟု ကိုသိန်းစိန်က ဖြေရှာ၏။
ထိုသို့ ပြဿနာများဖြစ်နေရင်း- အကြမ်းပရမ်းနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနေရင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ကိုစိုးဝင်းသေ၍ ယမမင်းထံ ရောက်လာသောအခါ ယမမင်းက ချက်ချင်းကြိုးတုပ်၍ စစ်ကြောရေးပုံစံ ဖြင့်ရိုက်လေ၏။ ထို့နောက် ၃၆ နာရီခန့်ကြာသောအခါ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ထုံးစံအတိုင်း ကုလား ထိုင်ပေါ်တွင် ထိုင်ခိုင်းကာ ငရဲကြီး (၈) ထပ်စလုံးမှ ငရဲအရာများ တယောက်တလှည့် စိစစ်ကြလေ၏။ ထို့နောက် ထောင်ထဲက ပုံစံအတိုင်း ပုံစံထိုင်းကာ မဟာအ၀ီစိငရဲတခုလုံးရှိ ငရဲသားများအားလုံးကို “ဗိုလ်စိုးဝင်း”ဆိုတာသူပဲဟုခေါ်ပြလေသည်၊ အကုသိုလ်အများဆုံးထဲက တယောက်ပေါ့ဟု မိတ်ဆက် ပေး၏။
ငရဲပြည်ရောက် အ၀ီစိငရဲရှိ လူအားလုံးကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ကိုစိုးဝင်းအလွန် ထိတ်လန့် အံ့သြသွားလေတော့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချုပ် သူရကျော်ထင်၊ ကိုစိန်လွင်၊ ဒေါက်တာမောင် မောင်၊ ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်မြင့်အောင် အပါအ၀င် ‚အကုန်လေးစားခဲ့ရသော ကြည်း၊ ရေ၊ လေမှ ဗိုလ်များနှင့် ရဲချုပ်များသည် မဟာအ၀ီစိငရဲတွင် စီနီယာငရဲသားများအဖြစ် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရကြလေ သောကြောင့်ပင်တည်း။ အားလုံး ကုသိုလ်အပေါင်းနှင့် တွေ့ကြံကြပါစေ၊ အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်ကြပါစေ။
ဗီဒီယို ကြည့်ရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 2:33 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:59 PM0comments
(ဖတ်ရှုလိုပါက စာပေါ်တွင် တချက်ထပ်ကလစ်ပြီး ဖတ်ပါ)
နိုင်ငံကျော် ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း (၁)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
ချမ်းမြစိုး ရေးထားပြီး သူ့ ဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ မန္တလေးရောက် ရှမ်းတယောက် သီချင်း အလိုက်နဲ့ ဆိုရတဲ့ စာသားလေးကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကို Lyric ပြောင်းပြီး ရေးထားပါတယ်။ မူရင်း Link ကတော့ ဒီမှာပါ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:25 AM0comments
ဒီဇိုင်းကိုမျိုး(၈၈)ရဲ့ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်းတနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပို့စကတ်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:19 AM0comments
ရဲရဲတောက် ကဗျာဆရာစောဝေ ရေပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်။
ဤကဗျာသည်တိုက်ဆိုင်မှုလေလား၊ တမင်တကာရည်ရွယ်လေသလားဟူသည်မှာ ကဗျာဆရာ၏အရည်အချင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်းထုတ်ဝေသူနှင့်အယ်ဒီတာများအား စာပေစီစစ်ရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးမှခေါ်ယူစစ်ဆေးနေပြီး ကဗျာဆရာစောဝေမှာ တိမ်းရှောင်နေသည်ဟုသိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့က အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကဗျာလေး
လိုးရှင်းကို လိမ်း …။ ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:16 AM 1 comments
ချီးလေးချီး ခွေးရောင်စုံအငြိမ့် ကြည့်ကြမလားတဲ့ ...
ရုံတင်တော့မည့် ရမ်ဘိုဇာတ်ကားနှင့် သန့်စင်ဦး၏အတွေး
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည့် သီးလေးသီးဆေးရောင်စုံအငြိမ့်ကြော်ငြာ
ရွှေဝါရောင်ဒီလှိုင်းများ အမှတ် ၂ (၅၀မိနစ်)
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မိနစ် ၅၀စာ ဗွီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ မမြင်ရ မကြားရသေးတဲ့ မြင်ကွင်းများ အသံများစွာ ပါရှိပါတယ်။ ကြည့်စေလိုပါသည်၊
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:33 AM 1 comments
နေ၀င်သွားပေမယ့် အမှောင်ဓာတ်ကရုတ်တရက် လှမ်းမလာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ခေတ်မှီမြို့ပြရဲ့လျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ကို စပြီးမြင်နေရပြီ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကကောင်းကင်အောက်မှာမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး အေရီယယ်တိုင်လေးတွေကလည်း တလက်လက်နဲ့ သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်နေကြတယ်။အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပါလို့ လှမ်းပြီးမျက်စပစ်နေကြလေရဲ့။
ညနေခင်းလေပြေလေညှင်းက တချက်တချက်ဝေ့ကနဲဝေ့ကနဲတိုက်နေတယ်။ ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ဖက်ကမကြာမကြာတက်လာနေတဲ့လေယာဉ်ပျံတွေကိုအချက်ပြမီးရောင်တလက်လက်နဲ့တွေနေရတယ်။အသံကတော့သိပ်မကျယ်လှပါဘူး။
အရင်တုန်းကလို ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်ခြား တစီးတိုက်ခန်း ပေါ်က ဖြတ်ဖြတ်ပျံနေကြတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီးတွေရဲ့ဆူညံမြည်ဟိန်းတဲ့အသံကြီးတွေကိုမကြားရတော့တဲ့အတွက်ဆူဗာနဗွန်လို့ခေါ်တဲ့လေဆိပ်အသစ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရပေလိမ့်မယ်။အသံတွေဟာသိပ်ဆူညံလွန်းနေတော့လည်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ အိပ်တန်းဝင်တော့မယ့် ချိုးငှက်နှစ်ကောင်က ခပ်လှမ်းလှမ်းက သစ်ပင်ထိပ်မှာလာနားရင်း ဆည်းဆာရည်ကို နှုတ်ခွန်းဆက်သနေကြပုံရရဲ့။ “အိပ်မက်လှလှမက်ကြပါစေ ချိုးငှက်ကလေးတွေရေ” မိုးလင်းမိုးချုပ် ကျေးငှက်ကလေးတွေရဲ့ အော်မြည်သံကိုအချိန်မရွေးကြားရနိုင်တဲ့ နေရာတခုမှာ ခဏတာခိုနားခွင့်ရထားတာဟာလည်း နည်းတဲ့ကံကြမ္မာမှ မဟုတ်ပဲလေ။အဲဒီလိုတွေးမိပြန်တော့လည်း စိတ်ထဲ မှာ အတော်အတန် ကျေနပ်ကြည်နူးသွားမိတယ်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းပန်းရုံဘေးမှာဝပ်နေကြတဲ့ယုန်ကလေးနှစ်ကောင်ရုတ်တရက်ထပြေးသွားကြတယ်။သုတ်ကနဲလေဝှေ့မှာ ပါလာတဲ့ မိုးစက်တွေကြောင့်ပဲထင်ပါရဲ့။ မိုးပွားကလေးတွေ ကျလာပြီ။ ဘန်ကောက်မှာတော့ မိုးရွာ တာဟာ ၀မ်းသာစရာတမျိုးပဲ အနည်းဆုံးတော့ အပူချိန်အတော်အတန် လျှော့ကျသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ တီဗွီရီမုကို တချက်အနှိပ်လိုက်မှာ TITVလိုင်းကသတင်းကြေငြာနေတာပေါ်လာတယ်။အော်…သူတို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေမူကြမ်းကိုလူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေကြပြီပဲ။
မင်းသားမင်းသမီးတွေအဆိုတော်တွေမဲဆန္ဒလာပေးနေကြတာကိုပြနေတယ်။အားလုံးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ထောက်ခံမဲပေးနေကြပုံပဲ သတင်းတကွက်အကူးမှာအနီရောင်တီရှပ်တွေဆင်တူဝတ်ထားကြတဲ့သူတွေအုပ်စုလိုက်လက်တွေမြောက်ပြီးရယ်နေကြတယ်။တီရှပ်ကစာသားကိုကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရလိုက်တယ်။ We Vote No ဆိုပါလား။ မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီက ရေးဆွဲလိုက်တာဆို ပေမယ့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရေးဆွဲခိုင်းတဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ တရားမ၀င်ဘူး။ဒီမိုကရေစီမပြည့်ဝဘူးဆိုပြီးမထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေကြတာပဲ။ ဒီမိုကရေစီကို လေးစားတန်ဘိုးထားတဲ့သူတွေ ရှင်သန်အားကောင်းကြပါစေ…။
မြင်ကွင်းထဲမှာ စုတ် ပြတ်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ဖယိုဖရဲလဲကျသေဆုံးနေတဲ့သူတချို့။ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ စစ်သား တချို့။ ဖိုရင်းဆစ် (Forensic) ရဲတချို့အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်။ဒါဟာနာရာတီဝပ်၊ ပါတာနီ၊ ဒါမှမဟုတ် ယာလာဆိုတဲ့ တောင်ပိုင်းခရိုင် တခုခုမှာ ဗုံးခွဲသတ်ဖြတ်တာ ဒါမှမဟုတ် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်တဲ့ သတင်းပဲဖြစ်မယ်။ပြင်းထန်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေဟာ လူသားတွေကို ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ပေးခဲ့ဘူးလှပြီပဲ။ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်က သင်ခန်းစာတွေကို အသိဥာဏ်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ လူသားတွေဘာလို့ မယူချင်ကြသေးတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် သင်ခန်းစာယူရကောင်းမှန်း မသိအောင်ကို မိုက်မဲကြတာပဲလား။ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း ပြန်စဉ်းစား လိုက်မိတော့မှ တို့ဆီကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ပိုပြီးယုတ်မာမိုက်မဲနေကြတာပဲ။ ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ သံဃာ တော်တွေကိုတောင် ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြပြီပဲ။ ဘာမှထူးပြီး အံ့သြတုန်လှုပ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ရ၀မ်ဒါ မှာ၊ အီသီယိုးပီးယားမှာ၊ ဆူဒန်ဒါဖါးမှာ၊ အီရတ်မှာ၊ ပါလက်စတိုင်းမှာအို … ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာသင်ခန်းစာတွေ အနမတ္တ။
အနိဌာရုံမြင်ကွင်းတွေရက်စက်မှုတွေကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာနေတဲ့စိတ်ကလက်ကတီဗွီရီမုကိုအလိုလိုပြောင်းခိုင်းလိုက်သလိုပဲ။ထိုင်းတက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပနေတယ်။မင်းသမီးတပါးက ဘွဲ့လက်မှတ်တွေချီးမြှင့်ပေးနေလေရဲ့။ဘာသံမှမကြားရ။တယောက်ပြီးတယောက်လျှောက်လာ၊ဒူးလေးညွှတ်ပြီးအရိုအသေပြု၊လက်ကလေးတဖက်ထိုးပေးဘွဲ့လက်မှတ်ယူပြီးဆင်းသွား ခဏအတွင်းမှာဘွဲ့ယူသူတွေအများကြီးကိုဘွဲ့လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှဇာချဲ့မနေကြဘူး။လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နိစဓူဝအလုပ်တခုလုပ်နေသလိုပဲ။ ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမနေသလို ဘာမှလည်းဇာချဲ့နေတာမတွေ့ရဘူး။ ဒါတောင်စဉ်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံ၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာဆို ဘယ်လောက်လွတ်လပ် သက်သောင့်သက်သာ ရှိလိုက်လေမလဲ။ကောင်းလေစ…။
လေလုံးထွားစကားကြီးစကားကျယ်ပြောဟိတ်ဟန်ထုတ်မဟုတ်တာလုပ်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘုရင်ရူးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ။ကိုယ်ကျိုးရှာဖော်လံဖားတွေရဲ့အပြောနဲ့အလုပ်တွေကို ပိုလို့ပိုလို့စက်ဆုပ်ရွံရှာလာမိတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့MWDနဲ့MRTVဆိုအတော်ဒေါသ ထွက်နေရပြီ။ပြည်သူတွေကိုအ လိမ်အညာလုပ်ဇာတ်နဲ့သတင်းလိမ်တွေကို လွှင့်ထုတ်လှည့်စားလာခဲ့တာကြာပေါ့၊ တခြားကြည့်စရာ တီဗွီလိုင်းကလည်းမရှိ၊ တခြားအပမ်းဖြေစရာကလည်းမရှိရှာကြသူပြည်သူလူထုခမျာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခံကြရရှာတယ်။ကိုယ့်အမျိုးသား ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး နာနာကျည်းကျည်းခါးခါးသည်းသည်းခံစားလာရတာကြာပြီ။
ဒီလောက်အတွေးအခေါ်ဖောက်ပြန်ညံ့ဖျင်းယုတ်ကန်ပြီးလူမဆန်အောင်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့သူတွေကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်အမျိုသားထဲမှာရှိနေတာတိုင်းပြည်ကိုဗိုလ်လုပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေသေးတာကိုက ခံပြင်းဒေါသဖြစ်စရာ၊အလိုမကျစရာဖြစ်လို့နေတော့တယ်။ရာစုနှစ်တ၀က်ကိုတောင်ဖြတ်သန်းခံစားလာခဲ့ကြရပြီ၊ ပြည်သူလူထုလူများစုကြီးကဆင်းရဲဒုက္ခအမှောင်တွင်းနက်ကြီးထဲမှာ ဝေဒနာမျိုးစုံကိုတလူးလူးတလွန့်လွန့်ခံစားအော်ဟစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ လက်တဆုပ်စာစစ်အာဏာရှင်လူနည်းစုနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ပြည်သူ့သစ္စာဖောက် အခွင့်အရေးသမား လူစုက ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးတန်သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေကို မောင်ပိုင်စီး အလွဲသုံးစား ကိုယ်ကျိုးရှာစည်းစိမ်ခံစား မာန်တက်နေကြလေရဲ့။ အရှက်မဲ့လိုက်ကြပလေ။
မတရားသော သူတို့သည် အုပ်စိုးသောအခါမူကား
(သုတ္တံကျမ်း ၂၉း၂)
ပြည်သူတွေဝမ်းပမ်းတနည်း ခဲလေသမျှသဲရေကျဖြစ်ရတဲ့အကြိမ်လည်းမနည်းလှတော့။ မတရားသောသူတို့အုပ်စိုးခွင့်အကြိမ်ကြိမ်ရခဲ့ကြ၊ ရနေကြဆဲ၊ ပြည်သူပြည်သားတို့စိတ်နှလုံးလည်းကြေပြုန်းဝမ်းနည်းနေကြရဆဲသဲထဲရေသွန်အဖြစ်ထက် သဲနွံတွင်းနက်ထဲကျွံနစ်လှုပ်ရုန်းထမရ၊ နစ်မြှုပ်သွားကြရတော့မှာလား၊ အဲဒီလိုတွေးလိုက်ပြီဆိုကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စိတ်တိုင်းမကျ စက်ဆုတ်စိတ်ပျက်လှပြီ။ ရေဒီယိုအသံလှိုင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့လိပ်ခဲတင်းတင်းရှေ့မတိုးနောက်ဆုတ်အဖြစ်တွေရဲ့ထူးမခြားနားဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြနေပြန်ပြီ။အားတက်ဝမ်းသာရမဲ့သံစဉ်တွေ စကားလုံးတွေ ရှားပါးလှတယ်။ တလင်းတခုထဲမှာ စပါးအနယ်ခိုင်းခံနေရတဲ့ နွားတွေရဲ့ဘ၀မျိုးဖြစ်နေကြပြီလား။ ကြိမ်အတို့ခံပြီးတလင်းကွင်းကိုတပတ်ပြီးတပတ်လှည့်ပတ်နေရပေမယ့်ကိုယ်နယ်နေရတဲ့စပါးကိုစားခွင့်မရ၊ပါးစပ်မှာခြင်းစွပ်ခံရ၊ မြင်သာမြင်ရမစားရ၊ဒီလိုနဲ့မိုးကြီးချုပ်ခဲ့ရ၊ ဓားပြမှန်းသိခဲ့ကြတာလည်းကြာပြီပဲ။ သဲသဲကွဲကွဲမြင်လိုက်ကြရတဲ့မင်းသားခေါင်းဆောင်းအောက်က ဘီလူးမျက်နှာကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ထပ်ကြည့်စရာ လိုပါဦးမလဲ။
အနောက်ဖက်တံခါးကတိုးရှဲဝင်ရောက်လာတဲ့ လေနုအေးတစဝေ့၀ဲသွားလို့ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လန်းဆန်းသွားသလိုပဲ၊ ညပိုင်းရောက်လာပေမဲ့ အခန်းရဲ့အပူချိန်ကသိပ်မကျချင်သေးဘူးအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ကမက္ကဆီကန်အမေရိကန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရေး၊ပညာရေးတန်းတူညီမျှရေး ဆန္ဒပြသပိတ်တိုက်ပွဲအကြောင်း ၁၉၈၆ ခုနှစ်လောက်က တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံရိုက်ပြထားတဲ့“WalkOut”ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကလေးကိုကြည့်လို့ကိုအားမရနိုင်ခဲ့ဘူး။ HBO ကခဏခဏ ပြန်ပြ ခဲ့သလို ကြည့်ခွင့်ရတိုင်းလည်း ရင်ခုန်အားရ ကြက်သီးမွေးညှင်းထခဲ့ရတယ်။ မနက် ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ စာသင်ခန်းထဲကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက“WalkOut”“WalkOut”လို့တတွတ်တွတ်အော်ဟစ်ရင်းကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကထွက်ပြီး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဝင်ကြပုံကို ကြည့်ရင်းသူတို့ကို ရုပ်ရှင်တခုမှာ သရုပ်ဆောင်နေကြတာပဲလိုက မမြင်တော့ပဲ တကယ့်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေလို့ မြင်ယောင်လာတယ်။အတိတ်က ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲသပိတ်တွေရဲ့ပုံရိပ်ဟာ တဖျတ်ဖျတ်ပြန်ပြီး ထင်ဟပ်လာသလိုပဲ ရင်ထဲမှာ တဆက်ဆက်တုန်ခါခုန်လှုပ်လာတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတဦးစီတယောက်စီရဲ့ရင်ထဲကအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်မြတ်နိူးစိတ်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံ့အညံ့မခံတတ်ပဲ ခုခံကာကွယ်တွန်း လှန်တိုက်ဖျက်လိုစိတ်တွေဟာ တစုတစည်းတည်း ပေါင်းစုမိသွားတဲ့အခါ မတရားတဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေတွေဟာ ကျောင်းသား ကျောင်း သူတွေရဲ့ ခြေဖနောင့်တွေအောက်မှာ မှုန့်မှုန့်ကြေသွားခဲ့ရတယ်။ အလေးပြုလိုက်ပါတယ်… ချီကာနို တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်ကလမ်းတွေဟာမြင်ကွင်းမှာဝေေ၀၀ါးဖြစ်လာနေတယ်။ဗဟန်းကြားတောရလမ်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ဆူးလေ ဘုရားလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊
အို…ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတွေ၊ ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတွေ။ ကြည့်လိုက်စမ်းပါအုံးတော့…ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊လူနေအိမ်တွေ တိုက်ခန်းတွေကနေ အလျှိုအလျှိုကလေး၊ လူလတ်၊ လူကြီးတွေ အဆက်မပြတ် ထွက်လာနေကြပြီး
“Walk Out” “Walk Out” “Walk Out” အဆက်မပြတ်အော်ဟစ်သံတွေ … ဟာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်သေးပါဘူး …“စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ ကျဆုံးပါစေ”
“သန်းရွှေ၊ မောင်အေး၊ ရွှေမန်း၊ သိန်းစိန် ကျဆုံးပါစေ”
“Walk Out” “Walk Out” “Walk Out” æ æ æ?
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:05 PM0comments
Burma Region and Poverty
တရုပ်စစ်ကားသစ်များ ရွှေလီနယ်စပ်သို့ ထပ်ရောက်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:29 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:55 AM0comments
မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ် မဲခေါင်ဒေသ (၅)နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာရှိကို ကူမူရားMasahiko Koumura တို့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံပွဲဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး ကဏ္ဍတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် စည်းဝေးပွဲအတွင်း မဲခေါင်ဒေသ(၄)နိုင်ငံတို့ကို အိုဒီအေအထောက်အကူ ယန်းကုဋေ (၆၀၀၀) ဖိုးပေးဖို့ ထုတ်ပြန် ကြေငြာဖို့ ရှိတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်၊ မနက်ဖန် ညနေပိုင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌါန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မစူအို ဆကာဘာက ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးရာမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်မှု အကြောင်း အပြင် ဂျပန်သတင်းထောက် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလည်း မိနစ်(၃၀)ကြာဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ဆာကာဘာက ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အပြင် တခြားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းမှာလို့လည်း မစ္စတာ ဆာကာဘာကပြောပါတယ်၊ ”
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင် တခြား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အခြေအတင် ဆွေးနွေးမှု စတင်ဖို့ ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ရာမှာ လူတဦး၊ နှစ်ဦးနဲ့မပြီးပါဘူး၊ အုပ်စုအားလုံးပါဝင်ကြရမှာပါ၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ဖို့အခြေအတင်ဆွေးနွေးမှုမှာ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ ကိုလည်း ပါဝင်ဖို့လိုတာကို ကျနော်တို့ ထောက်ပြဖို့လိုတယ်လို့လည်း မစ္စတာ ဆာကာဘာက ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ရေးအတွက် ခြေလှမ်းများယူဖို့နဲ့ အခြေအတင် ဆွေးနွေးမှုစတင်ဖို့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က သတ္တိရှိရှိနဲ့ ခြေလှမ်းယူပါဆိုတာကို ဂျပန် အစိုးရဘက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌါန ပြောခွင့်ရက ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလက ရဟန်းရှင်လူတွေ ပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက သွေးထွက်သံယို ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ဗွီဒီယိုရိုက်ရင်း ဂျပန်သတင်းထောက် ခန်းဂျိနာဂါးအိ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ စစ်သား တဦးရဲ့လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမှုအကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ဆာကာဘာက ပြောပါတယ်၊”
ဂျပန်အလှူငွေများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တိုက်တွန်း
မြန်မာပြည်က ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြကြတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများကို အစိုးရက နှိပ်ကွပ်ပြီး သတင်းယူနေတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက် ကန်ဂျိနာဂါအိ ပစ်သတ်ခံရလို့ မြန်မာပြည်ကို အထောက်အပံ့ လျှော့ချထားခဲ့ရာကနေ အခု အထောက်အပံ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသန်းခုနှစ်သိန်းကိုးသောင်းပေးမယ်လို့ ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးများနဲ့ အမျိုးသမီးများကို သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ၊ ကုသဆေးများနဲ့ စမ်းသပ်ကိရိယာများအတွက် သုံးစွဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ယူနီဆက်ဖ်) တို့က ကြေညာလိုက်တာပါ။
အဲဒီလို ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ သဘောတူညီချက်ကို မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ် ယာဆူဝါကီ နိုဂါဝါ (Yasuaki Nogawa) နဲ့ ယူနီဆက်ဖ်ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ရာမက်ရှရတ်စ်သာ (Ramesh Shrestha) တို့ ဒီကနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းကိုအောက်မှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ဂျပန်နှင့် မဲခေါင်ဒေသ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအတွင်း ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားရန် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး (Human Rights Watch) အဖွဲ့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာဆာဟီကို ကိုမူရာ (Masahiko Koumura) သို့ ပေးပို့သော နယူးယောက်ခ် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့၏ အာရှတာဝန်ခံ ဆိုဖီ ရစ်ချတ်ဆန် (Sophie Richardson) ၏ စာတွင် တိုကျိုမြို့တွင် မနက်ဖြန်တွင် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပမည့် ဂျပန်နိုင်ငံကို တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မဲခေါင်ဒေသတွင်း အကြီးဆုံး အလှူရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်သော ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဒေသတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် မရှိသည့် အခြေအနေ အပါအဝင် အခြားဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အခြေအနေများကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးသင့်သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ဒေသတွင်း နိုင်ငံများသို့ ထောက်ပံ့ ပေးငွေများသည် ဆိုးရွားသော အစိုးရ အာဏာပိုင်များ လက်ထဲတွင် အလွဲသုံးစား ဖြစ်နေသည့် ကိစ္စကို စနစ်တကျ ပြန်လည် စိစစ်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျပန်က ပေးပို့သော ထောက်ပံ့ငွေများသည် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှု လက်ထဲ ရောက်သွားခြင်းမျိုးကို လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ဥပမာပေး ထောက်ပြထားသည်။
ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့က အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများကို တိုက်ခိုက်သော အဖွဲ့အစည်းဟုလည်း ပါရှိသည်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်က မြန်မာပြည်သို့ ယန်ငွေ (၂၆) (ဒေါ်လာ ၂ သိန်း ၄သောင်း ) သန်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
“ဂျပန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စဟာ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီရဲ့ အဓိကကျောရိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။ မြန်မာ အပါအဝင် မဲခေါင်ဒေသ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ အပေါ်မှာ နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ ကိစ္စကို အဆုံးသတ်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ရစ်ချတ်ဆန် က ပြောသည်။
အလားတူ ဂျပန်နှင့် မဲခေါင်ဒေသ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် တိုကျိုသို့ ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ လက်ထောက် အတွင်းဝန် စကော့ မာဆီရယ် (Scot Marciel) ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံများသည် မြန်မာပြည်၏ လမ်းမှား ရောက်နေသော အဖြစ်ကို တညီတညွတ်တည်း ထောက်ပြ ပြောဆိုသင့်သည်ဟု ပြောလိုက်သည်။
“တရုတ်၊ အာဆီယံ၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အီးယူ၊ အိန္ဒိယ အားလုံးက မြန်မာပြည်အတွက် အခုအချိန်မှာ တသံတည်း ထွက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ မြန်မာပြည် ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ မဟုတ်ကြဘူး။ စစ်အစိုးရက အခု သွားနေတဲ့လမ်းဟာ လမ်းမှားဖြစ်တယ်။ ကြာလာရင် မြန်မာပြည်အတွက်သာ မကဘူး၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအတွက်ပါ အန္တရာယ်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာပါ” ဟု မာဆီရယ်က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ၈ သန်းနီးပါး ထောက်ပံ့သွားမည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံက ယမန်နေ့တွင် ကြေညာထားသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ ဂျပန်သံရုံးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီ (ယူနီဆက်ဖ်)၏ ကြေညာချက်အရ ဂျပန် ထောက်ပံ့ကြေးများသည် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများအတွက် အသက် အန္တရာယ်ရှိသော ရောဂါရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ၊ ဆေးဝါးများအတွက် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဂျပန်သည် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံနေရသော မြန်မာပြည်၏ အဓိက အထောက်အပံ့ ပေးနေသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့သော် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်က ဂျပန် သတင်းထောက်ကို ပစ်သတ်မှုကြောင့် အလှူငွေ ဒေါ်လာ (၅) သန်း မပေးတော့ပေ။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် ဂျီဒီပီ၏ (ဝ ဒဿမ ၃) ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် အသုံးပြုသည်ဟု ဆိုသည်။
နအဖ လက်ပါးစေ ဥာဏ်ဝင်း မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းအကြောင်းပြ၍ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ငွေတောင်းရန်လာမည်
နိုင်ငံတကာလျှောက်လိမ်နေသော နအဖနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုသူ ဥာဏ်ဝင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းပြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကို မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး လာယူမည်ဖြစ်ပါသည်၊ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော ဂျပန်ရောက်မျိုးချစ် မြန်မာများလည်း ယနေ့နေ့လည် မှစ၍ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်၊
In an interview accompanied by her personal paparazzi Adnan Ghalib, Britney told The Spoof.com, "Aung San Suu Kyi has long been estranged from her own two children through her involuntary detention and house arrest, I now believes that this wasasign and that she, Paris and I haveaspecial connection. I also shaved my head last year and attackedacar with an umbrella, I saw the monks in Burma carrying umbrellas during their demonstartions last year and I need to act upon this synchronicity, first we'll visit Rangoon and then travel to Yangon." When it was pointed out to Britney that they were alternative names for the same place she paused before replying "You mean like Paris Hilton and Paris Hilton.
"When asked their reasons for attending Burma during its "Thingyan" festival in April, Britney replied "We heard that itsareally good piss up and we wouldn't want to miss that, Paris is going to join me there after her trip to Rwanda.
"Staff at the Burmese Embassy in Washington DC would not comment on whether Britney or Paris Hilton would be granted visas.
စက်တင်ဘာအရေးအခင်းနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် လူမှုထူးချွန်ဆုများအပါအ၀င် ဘွဲ့တံဆိပ် အမျိုးမျိုးကို မကြာသေးမီကပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ဘွဲ့တံဆိပ်ရရှိသူများကို နိုင်ငံတော်သတင်းစာများမှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူကြောင်း ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့ အတင်းအကြပ်ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၊
ဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရသူများက ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဖော်ပြမှုများကို သတင်းစာများမှာ နေ့စဉ်တွေ့မြင်ရခြင်းက ပြည်သူများအနေနှင့် စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ၀န်ထမ်းများကြား ယုံကြည်မှု ခိုင်မာနေတယ်လို့ ထင်မြင်အောင် ယခုလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဘဲ လူထုကို နှိပ်စက်သူများအား နအဖမှ လူမှုထူးချွန်ဆုတွေပေးအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်၊ မြို့ နယ်များထဲမှ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကြံ့ဖွတ်စွမ်းအားရှင် နိုင်ထွန်းဆိုသူသည် စက်တင်ဘာလတွင် ရဟန်းသံဃာများနှင့် ပြည်သူများအား ရိုက်နှက်ရာတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဦးဆောင်ခဲ့၍ ယခုနှစ်တွင် လူမှုထူးချွန် တတိယအဆင့် ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည် လမ်းမတော်မြို့နယ် ၁၄ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၆၉)၊ ဒုတိယထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သံစဉ် Beauty Saloon ဟု အမည်ခံထားသော ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင် အစုရှယ်ယာများ ထည့်ဝင်ထားပြီး အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖို့ဝိန်းမြို့တွင် မြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက် ဒေါ်လာ၁၃၃၀၀၀ ခန့် ကူညီထောက်ပံ့
မြန်မာဒုက္ခသည်များအားအဓိကတာဝန်ယူကူညီပေးနေသောကက်သလစ်ချာရတီ(Catholic Charities)အားမြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍The St. Joseph Community Health Foundation မှထောက်ပံ့ငွေနှစ်ရပ်စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ၁၃၃၀၀၀ကျော်ခန့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်ဟုဖို့တ်ဝိန်းမြို့ တွင်နေ့စဉ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဂျာနယ်ဂေဇက်(The Journal Gazette)သတင်းစာ၌ဆောင်းပါးရှင်Amanda Iacone မှဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ထုတ်သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြရေးသားထားပါသည်။ ထိုသတင်းသည်မြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက်ဝမ်းသာစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဖို့တ်ဝိန်းမြို့ ရှိကက်သလစ်ချာရတီရုံးဝန်ထမ်းများထဲတွင် ၈၈မျိုးဆက်မြန်မာကျောင်းသားများလည်းဝန်ထမ်းများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရာတွင် ကိုငြိမ်းချမ်းဦးသည် ကက်သလစ်ချာရတီ၏ ဒါရိုက်တာတဦးအဖြစ် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ အခက်အခဲပြသနာများအား ကူညီဖြေရှင်းပေးနေသူတဦးဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းပြည်အရေးဆွေးနွေးတာလား၊ ထုတ်ပြန်တဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ရတာကတော့ စကားတော့ပြောနေကြပုံ ရှိပါရဲ့။ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလည်း လူသိရှင်ကြားလည်းထုတ်မပြန်ဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားခံတယောက်ကို စစ်ဆေးသလိုမျိုး စစ်ကြောရေးထုတ်တာလား-လို့ မေးရမလို ဖြစ်နေပါပြီ..။ တိုင်းပြည်အရေးကို ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင် အခုဝန်ကြီးမှာ ဘာအာဏာမှ မရှိသလို.. ဒီလောက် တနာရီဝန်းကျင်ဆိုတာကလဲ “ဟဲလို.. မင်္ဂလာပါ..” လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ အချိန်စေ့သွားမှာပါ..။ဆွေးနွေးနေပါတယ်-ဆိုပြီး UN ကို ညာချင်တာလား.. ဆိုတာကတော့ နအဖ-ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးပါ..။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:54 PM0comments
ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက် နေ့၇ နာရီ ခန့် တွင် ဖြူးမြို့ ညောင်ပင်သာ ဘောလုံးကွင်း မှာ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ပျဉ်းမနားမှာ စေလွတ်ထားတဲ့ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့ ဝင် ၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နအဖကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မူးချုပ်အောင်ကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာခုလိုဗုံးကွဲမှုဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်နိင်ငံရေးအကဲခတ်များကနအဖလက်ချက်လားလို့သံသယရှိနေကြပါတယ်။နအဖကနိင်ငံတော်လုံခြုံရေးမကောင်းသေးလို့အကြောင်းပြပြီး တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အချိန်ဆွဲလေ့ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗုံးကွဲ မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအင်ယူ တပ်မဟာ၃၊တပ်ရင်း၈မှာတပ်ကြပ်စောဒီသောမူးလက်ချက်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ကေအင်ယူတပ်မဟာသုံးလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေကဖြူးကိုလက်လှမ်းမီနိင်တဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကေအင်ယူကိုစွပ်စွဲတာဖြစ်နိင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တပတ်အတွင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု က နအဖ အမာခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ ကြပ်ပြေး မြို့မှာပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Rambo ၏ လက်နက်ဖြင့် နေ၀င်း၏ သားဆိုးမြေးမိုက်များဖြစ်သော သန်းရွှေ ဂိုဏ်းအား ဆုံးမခြင်း
Rambo ရုပ်ရှင် ပြသ သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း နိုင်ငံတကာတွင်ရောက်ရှိနေကြသော တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးလိုလားသည့် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံ ပါသော တီရှပ် သို့ မဟုတ် မည်သည့်မြင်သာထင်သာသည့် အက်ျီလက်ပတ် အလံ ဖြင့်မဆို သွားရောက်ကာ ရုပ်ရှင်လာပရိသတ်များအားမိမိတို့ မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်ကြောင့်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံစာများ လက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှကြပါ။..
ဆေးရောင်စုံအဖွဲ့၏ ၁၂-၀၁-၂၀၀၈ ဘန်ကောက်မြို့ပွဲစဉ် အမှတ်တရ ပုံရိပ်
မြန်မာပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပသို့ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာ နိုင်ငံသားများကြားမှာ လူကြိုက်များရေပန်း စားနေသော သီးလေးသီးဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့ဟာ အနုပညာအင်အား လည်းတောင့်တင်းပြီး။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးလုပ်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများပေါ များသောဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ဖျော် ဖြေတင်ဆက်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်၊လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက် နေပြီး အဲဒီကပြီးရင် တောင်ကိုရီး ယားနှင့် အမေရိကားတို့အထိပါ ကပြ အသုံးတော်ခံ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ ဖိတ် ခေါ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် ကိုဂေါ်ဇီလာက ပြောဆိုပါတယ်၊ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့ အတွက် မြန်မာ့အနုပညာကိုလေးစားမြတ်နိုးတဲ့ ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေက ကြိုးစားနေကြပြီး မကြာခင်အ ချိန်အတောအတွင်းမှာ အားပါးတရ ရှူစားနားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်၊
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:03 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:38 AM0comments
စစ်ကျွန်စံနစ်ကို အမြစ်ပြတ် တော်လှန်ချေမှုန်းကြပါစို့ …
စစ်ကျွန်ပြုတာကို ခံရတဲ့ သူတွေထဲမှာ လူဘုံအလယ်မှာ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ဖိနပ်တိုက် ဖိနပ်စီးပေးနေရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လေးတွေလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ (အပေါ်က ပုံကိုကြည့်ရင်) ထင်ရှားပါတယ်။ စစ်တပ်အတွင်းက စစ်သည်တော်တွေ ဘာကြောင့် စစ်ထဲ ၀င်ခဲ့သလဲ၊ စစ်သင်တန်း တက်စဉ်မှာ ဘာတွေ ဆိုခဲ့ရသလဲ၊ သင်တို့ရဲ့ လက်ရှိ ဘ၀အခြေအနေက ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားကြပါ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်နေပါတယ်လို့ ဓာတ်ပြားပေါက်မတတ် ပြောနေကြတဲ့ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ပဒေသရာဇ်နဲ့ ကျွန်ပိုင်ရှင်ခေတ်ဆီ နောက်ပြန်လှည့် ချီတက်နေကြတာကို တပ်မတော် အကြီးအကဲကြီးတွေနဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး အသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ ပြည်သူတွေက သင်တို့တတွေ စစ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတာပါ။ ပြည်သူနဲ့အတူ သင်တို့လက်တွဲပြီး စစ်ကျွန်ပြုနေသူ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တသိုက်ကို တိုက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားက ရဲဘော်တို့ သင်တို့သင်နေတဲ့ ပညာတွေက ဖိနပ်တိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ကြဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကျနော်တို့အားလုံး အတူလက်တွဲပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့။ စစ်ကျွန်စံနစ်ကို အမြစ်ပြတ် တော်လှန်ချေမှုန်းကြပါစို့။
(www.didfortwayne.blogspot.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
အိမ်ကျယ် (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု လုံးဝမရှိတော့သော စစ်အစိုးရ
ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်ဆန္ဒပြသည့် အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ ရေချယ်လ် ဂိုးဝင်းအကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါး လေး ဖြစ်သည်။ သူမက လမ်းမီးတိုင်တွင် မိမိဘာသာ လက်ထိပ်ခပ်၍ ဒီမိုကရေစီသီချင်းတပုဒ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် သီဆို ခဲ့သည်။ ဤပြစ်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ (သို့သော် ၂-လအကြာတွင် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။) သတင်းစာကြီးတစောင်၏ ဆောင်းပါးက ဤသို့ရေးခဲ့သည်။ “တချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့် ဧည့်ခရီးသွားများ သွား နိုင်ကြပါတော့မည်နည်း။ ငါတို့ တနေ့နိုင်ရမည် (We shall over come one day) ဆိုသည့် အဲန်ဂျီအိုနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများအပြား သီဆိုလေ့ရှိကြသည့် သီချင်းလေးကို လေချွန်မိ၍ပင် မြန်မာ ပြည်တွင် ဖမ်းခံရဖွယ် ရှိသည်။ ” ဟု ရေးသားခဲ့ သည်။ သို့သော်လည်း ၉ နှစ်အကြာတွင် အခြေအနေက ဤအတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခုတော့ စစ်အစိုးရက မေတ္တာပို့သံကြားလျှင်ပင် ကြောက်နေပြီ။
ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ…” ရဟန်းများက ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာဒေသနာ မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းကိုပင် ကြောက်နေပေပြီ။ ယောဂီဝတ်စုံဖြင့် ထွက်လာ လျှင် ငါ့ကို ဆန္ဒပြနေကြပြီလားဟု ထင်နေသည်။ လက်၌ ပုရိတ်ကြိုးချည်ထားလျှင်လည်း အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုဟု ထင်နေသည်။ ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးများက ဒေ၀ဒတ်အကြောင်း တရားဟောသည်ကိုပင် သူ့ကို စောင်းမြောင်း ပြောဆိုနေသည်ဟု ထင်နေသည်။ တရားပွဲများ ပိတ်သည်။ တရားခွေများ လိုက်သိမ်းဆည်းနေသည်။
အလားတူ အတိုက်အခံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုရမည်ကိုလည်း ကြောက်နေပြန်သည်။ ကြေငြာချက် အမှတ် (၁/၂၀၀၇) ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စကားပြောဆိုရေး ကိစ္စကိုပင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များချကာ ခံစစ်လုပ်နေ ပြန်သည်။ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ပြောထားပြီးဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင် တပ်မတော်အတွက် ထိုက် တန် သည့် ဂုဏ်ယူစွာ တပ်မတော်သားဟု ခံယူနိုင်သည့် နေရာမျိုး ရှိလိမ့်မည်။ ယခု ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင် နေကြ သော ကိစ္စသည်လည်း စစ်တပ်ကို ချေမှုန်းဖြုတ်ချရေးအတွက် မဟုတ်။ တိုင်းပြည်နှင့် နိုင်ငံသားများ မျက်နှာကို ထောက်ထား ၍ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရန်သာ တောင်းဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ တွေ့ဆုံရမည့် အရေးကိုလည်း ကြောက်နေပြန်သည်။
ယခု အင်တာနက်များကို ဖြတ်တောက် ပိတ်ဆို့နိုင်ရန် လုပ်နေပြန်သည်။ စည်းကမ်းများ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထုတ်သည်။ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများကို အဆမတန် အခွန်တိုးကောက်၍ လူအများမကြည့်နိုင်စေရန် လုပ်သည်။ မျက်စိပိတ် နားပိတ်ထား ခြင်း အားဖြင့် လူအများက သူတို့ပြောသမျှ ယုံကြည်ကြမည်ဟု ထင်နေသည်လားမသိ။ သေချာသည်မှာ ပြည်သူအများက မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကိုလည်း ယုံကြည်မှု မရှိကြခြင်းပင်။
စစ်အစိုးရက မည်သို့ဝါဒဖြန့်ဖြန့် လူအများက လက်ခံကြ တော့ မည် မဟုတ်ပါ။နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေး ဆက်ဆံရေးတွင်လည်း အညှိုးငယ်ရဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်။ အာဆီယံအစည်းအဝေး တွင် လည်း သူ့အကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးများတွင်လည်း သူ့အကြောင်း၊ ယခုတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင်ပါ သူ့ အကြောင်း ဖြစ်လာပြီ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း လီကွမ်ယူက စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များကို “ငတုံးတွေ” (rather dumb) ဟု ပြောခဲ့ သည်။ သံတမန်ရေးအရ ပြန်လှန် ကန့်ကွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့။ အကယ်၍ မိမိကိုယ်ကိုသာ ယုံကြည်မှုရှိပါက ဖြစ်သင့်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စင်္ကာပူ သံတမန်ကို ခေါ်၍ ကန့်ကွက်စာပေးရမည်။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ထိခိုက်နစ်နာသွားနိုင်ကြောင်း နည်း နည်းတော့ ကြိမ်းမောင်းရမည်။ ယခုတော့ ဟုတ်၍ ငုံ့ခံသလို ဖြစ်နေသည်။ တလောက စင်္ကာပူနှင့် ထိုင်းတို့ အနည်းငယ် တင်းမာမှု ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၆ စက်တင်ဘာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတော့ စင်္ကာပူက ဆရာကြီးလုပ်၍ ဒီမိုကရေစီ လက်ချာပေးသည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလတွင် ဖြုတ်ချခံရသူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှီနာဝပ်ကို စင်္ကာပူက ပုဂ္ဂလိက အလည်အပတ်ခရီးလက်ခံခဲ့သည့်အခါ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြဿနာရှာတော့သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို သံတမန် ရေးအရ ကြိမ်းမောင်းသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အေဆီယံအစီအစဉ်ဖြင့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေသည့် စင်္ကာပူ စစ်သားများ ၏ အစီအစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်။ တော်တော် တင်းတင်းမာမာ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လ အတော်ကြာမှ ပြန်ပြေလည်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယုံကြည်မှုနည်းနေသော မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ဤသို့မလုပ်ရဲခဲ့ပါ။ ဆေးကုစရာ နေရာ လေးလည်း ပျောက်သွားနိုင်သေးသည် မဟုတ်ပါလား။
တဖန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်ဇ်က မြန်မာနိုင်ငံကို အာဏာရှင်များ၏ နောက်ဆုံး ကျွင်းကျန်သည့် ခံကတုတ်ကျင်းဟု အမည်တပ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်သမတ ကတော် လော်ရာဘုရ်ှက ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး မလုပ်နိုင်လျှင် ဆင်းပေးဟု လူသိရှင်ကြား ပြောခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန် ရဲပါ။ ငုံ့ခံနေကြသည်။ အနည်းဆုံး သံတမန်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုမျှပင် မလုပ်ရဲကြပါ။ ကိုယ်မှန်လျှင် ငုံ့ခံမည် မဟုတ်သော် လည်း၊ ကိုယ်က မှားတော့ ငြိမ်နေရသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ယုံကြည်မှု အကြီးအကျယ် ကျဆင်းနေသည်ကတော့ သိသာလှသည်။မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အိမ်တွင်သာ အလိုလိုက်ထား၍ ဆိုးနေသည့် အိမ်ကျယ် မျိုးနှင့် တူနေသည်။ မိမိ ကိုယ်တွင်း၌ ယုံကြည်မှုအားနည်း၍ အခြားကလေးများကို လိုက်ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်တတ်သည့် ကလေးဆိုး (Bully) မျိုးနှင့် တူနေသည်။ သူ့ထက်ကြီးသူဆိုလျှင် ကြောက်သည်။ အိမ်အပြင်ကွင်းတွင်ဆိုလျှင် ကြောက်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ က ကလေးဆိုးထက် ပို၍အန္တရာယ်ကြီးသည်။ အင်အား ၄ သိန်းကျော်ရှိ စစ်တပ်ကြီးကိုင်ထားပြီး ဗိုလ်ကျနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကို ထင်ရာကျဲ ရောင်းစားပြီး၊ အရုပ်ကလေးများကို ဖျက်ဆီးချိုးဖဲ့လေ့ရှိသည့် ကလေးဆိုလို ဖျက်ဆီးနေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု အပြီးတွင်တော့ စစ်အစိုးရ၏ ယုံကြည်မှုရေချိန်က အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ မိမိဘာသာ အားတင်းပြောနေသော်လည်း မစွမ်းနိုင်တော့ကြောင်း သိနေသည်။ အချို့လှုပ်ရှားသူများကို မဖမ်းမဆီးရဲတော့။ အထူး သဖြင့် သီးလေးသီးအငြိမ့်ကခဲ့သူ ၀န်ထမ်းများကို အလုပ်ဖြုတ်ပြီးမှ ပြန်ခန့်သည်။ ပြည်သူများကလည်း ပို၍ ရဲရင့် လာကြသည်။ ဤပုံဖြင့် မိုးကြီးချုပ်၍ မရနိုင်တော့ကြောင်း သိလာကြသည်။ အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုအင်တာဗျူးများကို နားထောင်လျှင် ပို သိသာသည်။ ပြည်သူများက ပို၍ ရဲရင့်ပြောင်မြောက်စွာ ပြောလာကြသည်။
စစ်အစိုးရက ဤအသံများကို မကြားလိုပါ။ ကုလားအုပ်က သဲထဲသို့ ခေါင်းဝှက်ထားလျှင် လုံလှပြီဟု ထင်နေသည့် အပေါက် မျိုး ချိုးနေသည်။ ဤနည်းဖြင့် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်သလို၊ အဖြေလည်း ရှာတွေ့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။